Ciyaaryahan Juan Cuadrado oo Berri Imaanayo London,Si Tijaabo Caafimaad ugu Maro Kooxda Chelsea – Radio Muqdisho
Ciyaaryahan Juan Cuadrado oo Berri Imaanayo London,Si Tijaabo Caafimaad ugu Maro Kooxda Chelsea
Ciyaaryahan Juan Cuadrado ayaa berri diyaarad qaas ah oo uu leeyahay milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich u soo qaadanayo dalka ingiriiska,si uu tijaabo caafimaad ugu maro kooxda Chelsea oo hogaamineysa horyaalka ingiriiska.
Tababaraha kooxda Fiorentina Vincenzo Montella ayaa maanta shir jaraa’id ka sheegay in labada kooxood ay ku heshiiyeen iibka ciyaaryahan Juan Cuadrado.
Ciyaaryahan Juan Cuadrado oo 26-jir ah ayaa waxa ay kooxda Chelsea ku soo iibsatay lacag dhan £26.8million,iyadoo ciyaaryahan Mohamed Salah uu si amaah ugu biirayo kooxda Fiorentina.
Ciyaaryahan Juan Cuadrado oo u dhashay dalka Colombia ayaa maanta xarunta tababarka ee kooxda Fiorentina ku soo macasalaameeyay ciyaartoydii uu madada la ciyaarayay.
Xildhibaano hore & odoyaal dhaqameed oo baarlamaanka ka codsaday iney ansixiyaan Xukuumadda Cusub “SAWIRRO”
Midowga Afrika oo baarlamaanka ka codsaday ansixinta Golaha Wasiirada cusub